१२ बर्ष इजरायलमा काम गरि केहि महिना अघि नेपाल फर्केकी लामाको अचानक मृत्यु ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/१२ बर्ष इजरायलमा काम गरि केहि महिना अघि नेपाल फर्केकी लामाको अचानक मृत्यु !
१२ बर्ष इजरायलमा काम गरि केहि महिना अघि नेपाल फर्केकी लामाको अचानक मृत्यु !
काठमाण्डौं – इजरायल बाट फर्केको ८ महिनामा संजिता लामाको मृत्यु भएको छ । बिगत १२ बर्ष देखि काम गर्दै आएकी लामा ८ महिना अघि मात्र घर फर्केकी थिइन् । १२ बर्ष इजरायलमा काम गरेपछि आफ्नो भिषाको काम सकिएर केहि महिना त्यसै काम बिना अपार्टमेन्टमा बसेर फर्किएको उनका आफन्त निरज प्याकुरेलले ताजाखबरलाइ बताएका छन् । उनका अनुसार संजिता एकदमै राम्रो बहिनि थिइन् उनले यहाँ १२ बर्ष काम गर्दा आफ्नो घरपरिवार सबैलाई हेरविचार गर्थिन ।
यहाँ बस्दा पेटमा समस्या आएको थियो । शल्यक्रिया गर्नु पर्छ भनेपछि उनले म यहाँ शल्यक्रिया गर्दिन बरु नेपालमै गएर आफन्तको साथमा गएर उपचार गर्छु मरे पनि नेपालमै मर्ने हो यहाँ गर्दिन भनेर नेपाल फर्केकी थिइन् । नेपाल फर्केपछि उनको काठमाण्डौको ग्रेण्डी अस्पतालमा पाठेघरको अप्रेसन गरेर पूर्ण रुपमा निको भै उनि घरमा आफन्त संग बस्दै आएकी थिइन् ।
विदेश बाट नेपाल फर्केपछि उनले स्कुटर किनेर सिकेर बसेकी थिइन्, लकडाउनले गर्दा लाइसेन्स निकाल्न पाएको छैन भनेर केहि दिन अगाडी कुरा भएको थियो तर उनको निधनको खबर सुन्दा बिश्वास नै लागेको छैन भन्दै आफन्त निरज निकै स्तब्ध बनेका छन् । साउनेक्रान्तिको दिन देखि टाउको दुख्यो भनेर भन्ने गर्थिन तर सामान्य होला भनेर सिटामोल खाएर बस्ने गर्थिन तर शुक्रबार उनलाई अलि बढी नै टाउको दुख्न थालेपछि नजिकैको अस्पतालमा पुर्याइएको थियो तर त्यहाँ उनलाई यहाँ हुदैन यो टाउकोको समस्या रहेछ भनेपछि उनलाई अर्को अस्पतालमा पुर्याइएको थियो तर त्यहाँ कोरोनाको डरले समयमै चेकजाँच नगर्दा अस्पतालको लापरबाहीले उनको मृत्यु भएको प्याकुरेलले दु:ख ब्याग्त गरेका छन् ।
त्यहाँ केहि समय राख्दा ब्रेन ट्युमर भएको आशंका गरिएको थियो त्यसपछि उनलाई न्युरो अस्पतालमा पुर्याउंदा ब्रेन ट्युमर नै भएको पत्ता लागेको थियो । ब्रेन ट्युमरको पत्ता लागेपछि शुक्रबार उनलाई कोमामा राखिएको थियो । अस्पताल पुगेर केहि चेकजाँच गर्दा सम्म उनि होसमा थिइन् तर उनलाई सलाइन चढाएपछि उनि बेहोस भएकी थिइन्, होसै नखुली उनको कोमामै मृत्यु भएको इजरायलमा कार्यरत प्याकुरेलले बताएका छन् ।
घरबाट मोटरसाइकलमा आफन्तसंग बसी गएकी लामाको मृत्युले अहिले आफन्त लगाएत उनले कर्मथलो इजरायलमा पनि उनलाई चिन्ने नेपालीहरु स्तब्ध बनेका छन् । उनका शुभचिन्तक र आफन्तहरु यस घटनाले मर्माहत भएका छन् भने उनको मृत्यु नै बिश्वास गर्न असकिएको उना केहि साथीभाई र आफन्तले नै बताएका छन् । केहि दिन अघि राम्रो संग कुरा गरेकी बहिनी आज छैनन् भन्दा बिश्वास लागेको छैन । यहाँ बस यतै उपचार गरौला भन्दा उनि नमानी नेपाल फर्किन आखिर यस्तो हुन् लेखेको रहेछ भन्दै निरज भावुक बनेका छन् । उनि इजरायलमा हुँदा धेरै साथीभाई र सामाजिकक काममा चलेका अभियानहरुलाई आफ्नो तर्फबाट सकेको रकम साहयोग गर्दै हातेमालो गर्दै आएकी थिइन् । उनको मृत्यु पछि अहिले इजरायलमा काम गर्ने धेरै नेपालीहरुले दु:खद घटना सुन्नु परेको भन्दै उनलाई फेसबुकबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् ।
भदौ २४ देखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा हट्ने संकेत
कतारमा २४ घण्टामा एक हजारभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित थपिए